​बजार खुलेदेखि उच्च उतार चढाव रहेको नेप्से परिसूचक बन्द हुँद स्थिर
बुद्धबार, माघ २१, २०७१ साल,
काठमाडौं माघ २१ गते
। बुधवार नेप्से परिसूचक लगभग स्थिर रहेको छ । सो दिन अघिल्लो दिनको बन्द विन्दु ९९ सय ८७ दशमलव ५५० बाट बजार खुलेको हो । बजार खुलेदेखि उच्च उतार चढाव रहेको नेप्से परिसूचक केही समयमै बढेर ९ सय ८८ दशमलव ७७ मा उक्लियो । त्यसपछि बाटो परिवर्तन गरी ओरालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ९ सय ८७ दशमलव शून्य ३ मा पुगेर बजार बन्द भयो । यो अघिल्लो दिनको बन्द विन्दुभन्दा शून्य दशमलव ५२ अङ्क (शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत) तल हो ।
गत दुई दिन देखि नेप्से परिसूचक घट्दो अवस्था देखिएपनि अहिले शेयर बजार ओभर बट जोनमा नै रहेको छ । यद्यपी, साताका अघिल्ला दिनहरुमा पनि बजारले स्पष्ट दिशा समात्न नसकेर करीब स्थिर अवस्थामा रहेको थियो । बुधवारको कारोबारलेपनि सोही प्रवृत्ति पछ्याएको छ । यसले बजारमा लगानीकर्ताले विक्री चाप केही बढाएको देखिन्छ ।
सो दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ७ ले घटेपछि ‘अन्य’ समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३४, बीमा शून्य दशमलव १६ र बैङ्किङ शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले घट्यो । बुधवार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८२, होटेल शून्य दशमलव ७८, विकास बैङ्क शून्य दशमलव ७३ र जलविद्युत् शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको छ ।
बुधवार नेप्सेमा २ हजार ८ सय १७ व्यापारबाट १ सय ५२ कम्पनीको ७ लाख ७६ हजार कित्ता शेयर खरीदविक्री भयो । जसबाट रू.३४ करोड ३३ लाख रकम परिचालन भयो भने रू. १० खर्ब १२ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । सो दिन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर सर्वाधिक रू। २ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भयो । बुधवार शुभेच्छा विकास बैङ्कको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसैगरी, मेट्रो डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ८ प्रतिशतले घट्यो ।